प्रस्तावित शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा वडाहरू छिन्नभिन्न, एउटै वडा चार टुक्रा « Sthaniya Khabar
प्रस्तावित शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा वडाहरू छिन्नभिन्न, एउटै वडा चार टुक्रा
प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७३, बुधबार १३:२९
नक्सा– स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग ।
काठमाडौं, २९ काठमाडौं
गाउँपालिका र नगरपालिका भन्नेवित्तिकै भौगोलिक रुपमा सग्लो, वडाहरू जोडिएको र कुनै किसिमले नटुक्रिएको हुनु पर्ने हो । तर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको ८ नं. वडा चार टुक्रामा छिन्नभिन्न छन् ।
नक्साका अनुसार १ र ९ नं. वडा तीन/तीन टुक्रमा छिन्नभिन्न छन् । यसैगरि ५, ६ र ७ नं. वडा कुनै पनि वडासँग जोडिएको छैन । १ नं. वडाको एक टुक्रा र २ नं. वडा जोडिएको छ । यसै गरि ३ र ४ नं. जोडिएको छ ।
वडाहरू कसरी छिन्नभिन्न भए त ? पौडेलका अनुसार जनघनत्व भएका ठाउँहरू निकुञ्जमा पर्ने जंगल, हिउँ पर्ने खाली ठाउँ, खर्कका बीच–बीचमा छन् ।
नक्सामा देखिएको नीलो भाग त्यही जंगल, हिउँ पर्ने क्षेत्र, खर्कमा पर्छन् । त्यही नीलो भागको बीचमा वडाहरू टापुजसरी अबस्थित छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारी भन्छन्, “यो गाउँपालिका शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ । यहाँ जंगल, उच्चहिमाली क्षेत्र, पर्छन् । तर जनघनत्व न्यून छ ।”
कतिसम्म भने २ हजार ४५३ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको प्रस्तावित शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको जनसंख्या भने ३ हजारको हाराहारीमा छ । अहिलेको भिजेर, साल्दाङ र शे–फोक्सुन्डो गाविस गाभिएको यस गाउँपालिकामा ९ वटा वडा प्रस्तावित गरिएको छ ।
भिजेर गाविसमा पर्ने अहिले प्रस्तावित ८ नं. वडाको जनसंख्या ५० मात्र छ । भिजेरको ८ सय ९० बर्ग किमी जमिनमा मान्छेको बसोबास छैन ।
यसैगरि शे–फोक्सुन्डोमा पर्ने ७ सय ८६ बर्ग किमी जमिनमा पनि बसोबास छैन । साल्दाङको ६ सय ५४ बर्ग किमी भूगोलमा पनि कसैको बसोबास छैन ।
“जनसंख्याका मापदण्डअनुसार हो भने डोल्पाले ३ वटा मात्रै स्थानीय तह पाउने थियो । ठूलो भूगोलका कारण डोल्पाले ८ वटा स्थानीय तह पाएको छ,” पौडेलले भने, “कसरी वडाहरू छिन्नभिन्न भयो भनेर जिज्ञाशा आउला ! जनसख्ंया नै छैन, के गर्ने ? अपवादका रुपमा वडाहरू टुक्रिएको हो ।”
विगतमा जस्तो एउटा वडाको बीचमा टापुजसरी अर्को वडाको भू–भाग नपरेको अधिकारीले बताए ।